ntụrụndụ na ntụrụndụ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Naa: ntụrụndụ na ntụrụndụ
Etu esi eji aka gi mee iko kandụl. Gel Candle Ime Onodi
Ihe na 15.09.2019 09.10.2019
Omenala, kandụl na-enwu iji mepụta ọnọdụ pụrụ iche na gburugburu ya. Nke a bụ njiri mara oke mkpa nke ezinaụlọ ma ọ bụ mgbede ihunanya, ikuku dị ọkụ na-adọrọ adọrọ mgbe niile. Na mgbakwunye na iji ya, ...
Anyị na-eme uwe na okpu agha nke astronaut
Ihe na 15.09.2019 23.11.2019
Mgbe ezumike na-eru nso n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ọta akara, ndị nne na nna kwesịrị ị na-echekwa echiche maka ịhọrọ uwe nwa ha hụrụ n'anya. Ọtụtụ mgbe m chọrọ ibi na onyo mbụ ahụ, ka ememme ahụ wee ghara ...
Anyị na-achọpụta ụzọ esi akpụ ụgbọ ala site na plasticine
Ihe na 15.09.2019 06.12.2019
Ọ bụghị ihe nzuzo na ụmụaka nke afọ ọ bụla chọrọ ịrụ ọrụ, mụọ, kuziere ha ihe niile site na iji usoro egwuregwu. Ọ bụ ya mere ugbu a achọrọ m ikwu banyere otu esi akpụ akpụ site na plasticine ...
Topiary "Obi". Topiary n'ụdị obi. “Obi” nke nwere kọfị
Ihe na 15.09.2019 22.10.2019
Topiary, nke osisi mara mma, bu ụzọ pụta n’oge Alaeze Ukwu Rom. O we buru osisi di ndu, doziri ya aru n'udi di iche-iche. Ugbu a, aha ndị dị elu abụghị naanị ihe ndị mara mma nke odida obodo, mana ...
Ngwongwo akwụkwọ eji agbanye mmiri: dobe onwe gị akwụkwọ sunflower
Ihe na 15.09.2019 10.12.2019
Ndị na-amalite amalite na ndị omenkà nwere ahụmahụ na-eji ọtụtụ akwụkwọ ọrụ mara mma: kaadi, ngwa, usoro bouquet. Site n'enyemaka ha, ị nwere ike ime ihe onye ị hụrụ n'anya n'anya ma ọ bụ nye ụlọ gị pụrụ iche. Oke ikpo ọkụ ga-enye ...
A waya na ifuru: ka esi mee rose
N'otu oge, inwe ọ dịkarịa ala ụzọ abụọ nke tulal na-eyi uwe mara mma bụ nrọ nwa agbọghọ Soviet ọ bụla. Taa, ha mejupụtara akụkụ dị mkpa nke ego nwa agbọghọ ọ bụla maka "pin-pin", ka ha na-agbaji ngwa ngwa ...
Mama Sylvester Stallone na kpakpando ya
Wouldnye gaara eche na otu n'ime ndị na-eme ihe nkiri a ma ama na Hollywood taa na-ege ntị na ndụmọdụ nne na nna ya. Nne Sylvester Stallone ma ugbu a, n'afọ 93 ya, gosipụtara ahụike, ntụkwasị obi ...
Rembrandt - Foto. Rembrandt eserese na aha. Rembrandt Artist
Ihe na 15.09.2019 26.12.2019
Rembrandt Van Rijn, nke enwere ike ịhụ ihe osise ya na ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie n'ụwa, mmadụ niile nọ n'ụwa maara taa. Ọ bụ ọrụ ya ka a na-egosipụta egwu na ọ joyụ, ihe ijuanya na iwe.
Ndepụta nke 2015 melodramas (ndị Russia). 2014-2015 Russian melodramas: ndepụta nke fim kacha mma
Ihe na 15.09.2019 15.10.2019
Melodrama bụ ezigbo ihe nkiri maka ilele ụlọ. Ihe osise nke eserese dị otú ahụ na-abụkarị okwu egwu. Enweelarịrị ndepụta nke abụ olu ụtọ 2015. Ndị isi Russia rụpụtara ezigbo ọrụ mepụtara ọtụtụ fim dị mma. Fim na-atọ ụtọ ...
Boogeyman - onye ka ọ bụ? Enwere Boogeyman, oleekwa ụdị ọ dị ka akụkọ akụkọ Boogeyman si kwuo?
Ihe na 15.09.2019 27.12.2019
Ọ bụrụ na ịmasị ihe egwu, Boogeyman nwere ike ịmara gị. Ka emechara, otutu fim emeela maka agwa a. Ma ọ bụrụ na ị na-eche, sị: “Boogeyman - onye bụ onye a?”, Gụchaa akwụkwọ…
Frodo Baggins: Onye na-eme ihe nkiri Elijah Wood
Na mbido puku iri abụọ a nwere ọghọm n'ọhịa sinima. Site na teknụzụ kọmputa ọhụrụ, ndị na-emepụta fim ahụ ji akwụkwọ na-enweghị ike ibugharị ihuenyo ahụ tupu nsonaazụ pụrụ iche dị egwu. Otu n’ime ọrụ ndị a abụrụla…
Lermontov. Poems nke di mfe imuta - kedu ihe nzuzo?
Ihe na 15.09.2019 08.11.2019
Usoro mmụta na akwụkwọ Russia na ụlọ akwụkwọ gụnyere ụmụaka na-amụ ọrụ nke ọtụtụ ndị edemede. Otu n'ime ha bụ Mikhail Lermontov. Poems dị mfe mmụta, ọkachasị mmasị ụmụ akwụkwọ. Ndị dị otú ahụ ...
Grachevskaya Anna. Short biography
Ihe na 15.09.2019 21.10.2019
Nwa amaala Anna Evgenievna Grachevskaya bụ nwa agbọghọ nwere amamihe. Mana tumadi ikike ya gosiputara n'ikike icho onye ya na ya ga-ebi. Agbanyeghi na aka ozo - olulu mbu ya ka apughi ikpo ya…
Olga Zarubina: akụkọ banyere otu onye na-ewu ewu nke USSR
Ihe na 15.09.2019 30.10.2019
Jụọ onye bi na mbụ Soviet Union onye Olga Zarubina bụ. O nwere ike a gaghị akọtara gị akụkọ ndụ nke onye na-agụ egwú, mana ọ nwere ike ịbụ abụ ya n’abụghị nke…
Epic "Highlander": onye na-eme ihe nkiri bụ onye na-akpọ Connor MacLeod, na akụkọ ndụ ya. Ndepụta Friji Franchise
Ihe na 15.09.2019 29.10.2019
Na njedebe nke 80 - mmalite nke 90,, ihe nkiri nkiri n'okpuru aha "Highlander" bụ ihe ama ama. Onye na-eme ihe nkiri ahụ, onye na-akpọ Connor MacLeod, nwetara nnabata a chọrọ ozugbo, na ihe ịga nke ọma nke ọrụ ahụ, a tọhapụrụ ọbụna nke ...
Akụkọ a "Spikelet" - maka ụmụaka na ọbụghị naanị!
Ihe na 15.09.2019 19.10.2019
E nwere akụkọ ndị anyị maara site na nwata. Ọtụtụ mgbe, nne, nne nne ma ọ bụ nwa nwanyị na-agụpụtara ụmụaka ahụ tupu ha lakpuo ụra ma ọ bụ mgbe ha na-ezu ike. A na-echeta ihe osise doro anya na atụmatụ dị mfe maka oge ndụ niile, ...
Singer Pascal (Pavel Titov): biography, ndụ onwe onye, ​​creativity
Ihe na 15.09.2019 15.09.2019
Pascal - onye amara ukwe na onye dere Pavel Titov ka amara aha a. O weputara 3 album, egwu sitere na nke a na-agbasa na redio mgbe nile na Russia na mba ndi gbara ya gburugburu. Ewezuga ...
Abraham Van Helsing: otu akụkọ
Dike a ghọrọ “nna” nke ihe odide niile na-achụ undead. Solomon Kane, ụmụnne Winchester, John Constantine na ndị dike ndị ọzọ a ma ama, bụ “ụmụ” nke otu onye aha ya bụ Abraham Van Helsing. Akụkọ ndụ nke a…
Helen Mirren (Helen Mirren): biography, filmography na ndụ onwe onye nke omee (foto)
Onye na-eme ihe nkiri Bekee nke nwa Russia Helen Mirren (aha ya bụ Lidia Vasilievna Mironova) mụrụ na July 26 1945 nke afọ na London. Ogige ndị Mironovs, mechara mesịa, si n'aka Peter Vasilievich Mironov, onye isi nnụkọ ndị agha,…
Kachalina Xenia (onye na-eme ihe nkiri): biography na ndụ onwe onye
Ihe na 15.09.2019 17.09.2019
Kachalina Ksenia bụ onye na-eme ihe nkiri nke nwere ọmarịcha ọdịdị na akara aka siri ike. Chọrọ ịma ihe fim nke ọ sere? Wasnye lụrụ nwanyị n'ụzọ iwu? Ebee ka ọ gbapụrụ ruo ọtụtụ afọ? Azịza nye ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,562.